Maxkamadaha Somaliland oo wax ka qaban la kufsiga baahsan ee carruurta – Guban Media
Feb 21, 2017, carruur ka mudaaharaadaya gabadh yar, 12 sano jirtay oo lagu kufsaday Garowe, Somalia.(photo/file)
January 11, 2020 Ali Mohamed 408 Views 0 Comments
Waxa naxdin wayn, amakaag iyo afkalaqaad ku noqday qofkasta oo damiir leh xukunka maxkamadda Racfaanka ee Burco ku ridday dhagar-qabayaal. Inan yar oo dhawr sano jirta, ayuu ninka hooyadeed qabaa, kufsaday oo dabadeedna nafta ka gooyey. Kufsi iyo jidh-dil xun oo gabadhaa yar loo gaystay ayay u dhimatay. Xaakimku wuxuu yidhi waxay dhakhtaradii noo sheegeen in inanta yar jidhkeeda oo dhan meel fayow uuna lahayn. Jidh dil fool xun oo bani-aadaminamada ka baxsan ayaa lagu sameeyey ilmahaa yar ee waxba galabsan. Hooyada ilmahan yar dhashayna qayb ayay ku lahayd dambigan, sida Xaakimku sheegay. Inkastoo aanu faahfaahin doorka hooyadu dilkan bahalnimada ah ku lahayd.
← Baaq saxaafad: Shirkii afaraad ee Beel waynta Ciise Muuse oo ka dhici doona London December 28-29, 2019
Opinion: By claiming Democrats support terrorism, Republicans hit a new low →